५० रुपैयाले कलाकार बनेकी दिप शिखा !::Hamrodamak.com
सानैदेखि निकै चुलबुले स्वभाव भएकोले सबैले चटपटे भन्दै जिस्काउने गर्दथिए अनि जब लक्ष्यको अर्थ बुझ्ने उमेर भयो त्यही क्षणदेखि नै कलाकार बन्ने सपना मानस पटलमा बस्न थाल्यो । बाल्यकाललाई यसरी स्मरण गरिन नायिका दिपशिखा खड्काले । डिपिएस फाउन्डेसनको प्रेसिडेन्ट समेत रहेकी दिपशिखा नायिका साथै निर्माता पनि हुन । जिवनका यी नै भोगाइलाइ समेट्दै नायिका दिपशिखा खडका सङ्ग हाम्रो दमक डट कमकी सहकर्मी सुजाता निङ्लेकुले तयार पारेको यो प्रस्तुति
को हुन दिपशिख खडका ?
पुर्वी पहाडि जिल्ला धनकुटाको कुरुले मा २०५० साल फागुन २ गते बाबा सुर्य बहादुर खडका र आमा पदमा खडकाको कोखबाट कान्छी छोरीको रुपमा जन्म लिएकी हुन नायिका दिपशिखा खडका । कलाकार साथै एक सक्रिय समाजसेवी पनि हुन । धनकुटा जन्मस्थल भए ता पनि बल्यअवस्था उनको मोरङको मधुमल्ला हुँदै काठमाडौमा बितेको थियो । स्कुलले जीवन देखि कलेज जीवन समेत काठमाडौमा नै बितेका थिए । म्युजिक भिडियोदेखि अभिनय यात्रा आरम्भ गरेको बताउने दिपशिखाले दर्जनभन्दा बढी म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरिसकेकी छिन् ।
ठूलो पर्दामा पनि नायिकाको भुमिका निर्वाह गरीसकेकी खड्काले आफूले खेलेको कुनै पनि चलचित्रमा चाहेको जस्तो सफलता हासिल गर्न नसकेको असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरीन । आफैले अभिनय गरेको चलचित्र पुन दोहोर्याएर हेर्दा सफलता नमिलेकै कारण होला नरमाइलो महसुस भए र असफलता पनि हौसलाको एउटा खुड्किला सम्झिएको बताइन । हाल आफैले लेखिएको कथा प्रेमलिला चलचित्रको रिलिजको तयारीमा व्यस्त छिन दिपशिखा जुन फ्लिमको निर्माता पनि स्वयम आफै रहेकी छिन । भरखरै सार्वजनिक पोस्टरमा क्रोधित मुद्रामा कपाल मुन्डन गरिएको अवस्थामा देख्न सकिन्छ । चलचित्र क्षेत्रमा पाइला टेक्न पुर्व भोगेका संघर्ष र अनुभव र प्रत्येक मानिसको जिवनमा एउटा न एउटा लक्ष्य हुन्छ त्यहि लक्ष्य मध्येका मेरा स्वर्णिम सपना थियो कलाकार बन्ने त्यही सपनालाइ यथार्थ जिवनमा साकार बनाउन धेरै उत्तरचढाव अनि संघर्ष र अभावहरु पनि भोग्न परेको थियो ।
आमाले खाजा खान ५० रुपैयाँ दिनुहुन्थ्यो त्यो पैसाले भोक मेटाउन भन्दा पनि आफ्नो आकाङ्क्षा पूरा गर्न खर्छ गर्दथिए । ५० रुपैयाँ लाई जोगाएर अभिनय सिक्न जान्थे कहिलेकाही त घरमा आमाको गाली खाने डरले कलेज जान्छु भन्दै घरमा ढाटेर अभिनय कक्षामा जाने गर्थिए । आफू सङ्ग भने जस्तो पैसा नहुदा परीवारले थाहा नपाई बाहिर काम गरेर पनि कलाकार बन्ने सपना पूरा गरेको थिए । त्यो बेला को पीडा दिनभरी मेकप गरेर आफ्नो पालो कुर्न पर्ने तर दिनभरी कुर्दाकुर्दै पालो पनि आउदैन थियो निरासा भएर घर फर्किएका अनुभव पनि छन जिवनमा । तर आजभोली पहिलेको जस्तो छैन अवसरहरु धेरै छन त्यो भन्दा धेरै चुनौतीपूर्ण यात्राहरु पनि छन कलाकारीता क्षेत्रमा ।
असफलता र चुनौती आफुले अभिनय गरेका प्रत्येक चलचित्रमा कुनै सन्तुष्टिपुर्ण सफलता प्राप्त गर सकिन जस्ले गर्दा आफुलाइ निरासा त हुन्छ । आफैले अभिनय गरेको चलचित्र लाई पुन दोहोर्यातएर हेर्दा असहज त हुन्छ तर हारेर पनि जित्न सिकेकिछु । त्यही असफलताले पनि हौसला, उर्जा बढाएको छ । ती नै हारले अप्ठ्यारोमा पनि हिड्न सिकाएको छ त्यसैले एउटा जित र सफलताको चुनौतीपूर्ण यात्रा गर्दै छु आफैले लेखेको चलचित्र प्रेमलिलाको रिलिजको तयारीमा छु । मेरा लागि यो चुनौतीपूर्ण नै छ । प्रेमलिलाले दर्शक माझ दिन खोजेको खुराक, अभिनित कलाकार अन्तर्देशीय माया रहेको छ यो चलचित्रमा भारतिय कलाकार अलि खानको अभिनय रहेको छ ।
अलि खान दुवइमा मोडलिङ गर्दै आइरहेका छन दुवइमा एक कार्यक्रममा हाम्रो भेट भएको थियो त्यही भेटमा मैले प्रेमलिलाको कथा शेयर गरेकी थिए र उहाले मन पराए पछि यो चलचित्रको यात्रा आरम्भ भयो । भारत र नेपाल विचको माया छ । समय र अवस्था अनुसार एउटि नारी कसरी परीवर्तन हुने नि अनुसासन, मायामा त्याग, लगायत धेरै कुराहरुको शिक्षा दिएको छ । यो चलचित्रमा जनक पाण्डेको निर्देशन, पवन गौतमको छायांकन, महेश खडका, नवीन कार्की र रबिराज शाहको संगित, राजेश पायल राइको, शोभा पाण्डे र भारतिय गायक राजा हसनको स्वर रहेको छ । चलचित्रमा प्रलाद खरेल मुख्य सहायल निर्देशकको रुपमा छन भने दिपशिखा खडका, अलि खान, मौसम खडका लगायतका कलाकारको अभिनय रहेको छ ।
चलचित्र कै लागि कपाल मुन्डन गर्दाको अनुभव दर्शकलाइ भिन्न कथा प्रस्तुत गर्ने क्रममा एउटि नारीको सुन्दर गहना कपाल गुमाउन पर्दा दुख भन्दा पनि दर्शक लाई मैले दिन सकेको माया र पृथक रुपले सन्तुष्टि नै छु तर सुरुमा कपाल बिना हिड्दा अप्ठ्यारो महसुस त भयो पछि आफै बानी भए पनि घरमा आमाले धेरै गाली गर्नुभयो । कपाल काट्दा अरुले छोएको खादैन भन्ने पुरातन सोच शैलिका कारण आमाले मैले छोएको खानुभएन ।
मनपर्ने पोसाक धेरै जस्तो क्याजुवल, ठाउँ समय अनुसार आफुलाइ जुन लुगा लगाउदा सहज हुन्छ त्यही लगाउछु । मनपर्ने खाना नेपाली खाना दालभात अचार । स्वभाव, राम्रो पक्ष र नराम्रो पक्ष छुची अनि मुडि स्वभाव भए पनि खुल्ला मन सहयोगी भावना तर छिटो रिसाउने बानी ।
अन्त्यमा सर्वप्रथम नागरीक चासोलाइ धन्यवाद दिपावलिको सम्पुर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदिबहिनी साथै नागरीक चासो परीवारलाइ शुभकामना, मेरो आउदै गरेको चलचित्र प्रेमलिला लाई सम्पुर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदिबहिनीले हेरीदिनहुन अनुरोध गर्दछु । यहि माग २५ गते रिलिज हुदैछ यहाहरुको माया सल्लाह सुझाव र नराम्रो भए गाली को पनि अपेक्षा राखेकी छु । विशेष नागरीक चासोले सदैव खोजमुलक, सत्य तथ्य समाचार सम्प्रेषण गर्न सफल रहोस शुभकामना सहित पुन धन्यवाद दिन चहान्छु ।